City Dainik - Nepal's Online Digital Portal
उपत्यकाभित्र कोरोनाको डर : रात्रिकालीन व्यवसाय गर्न प्रशासनको रोक !
उपत्यकाभित्र कोरोनाको डर बढेको छ । प्रशासनहरुले रात्रिकालीन व्यवसाय गर्न नै रोक लगाउन थालेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । बुधवारको जिल्ला कोरोना भाइरस विपद् व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी) को बैठकले राति ११ बजेपछि व्यवसाय
के राजेन्द्र खड्गीले मुक्काले राँगा ढालेकै हुन् त ? भिडियो
कुनैबेला ‘हातले मुक्का हानेर राँगो ढाल्छ राजेन्द्र खड्गीले’ भन्ने गरिन्थ्यो । फिल्ममा खलपात्रको अभिनयका क्रममा उनले नचिन्ने सायदै भेटिएला । सोमबार काठमाडौंको बागबजारमा राजेन्द्र खड्गी उनका बाल्यकालका साथिसँग सँगै भेटिए । बाल्यकालका साथि राजमान महर्जनको पसलमा भेटिएका राजेन्द्र खड्गीलाई हामीले मुक्काको विषयमा थप
८ फागुन २०७७ मा विराटनगरमा आयोजित एक सभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सप्तकोशीमा जेटबोट चलाउनेबारे लामो भाषण गरे । उक्त भाषणमा उनले जेटबोट चलाउने आफ्नो योजनामा तगारो बनेको सप्तकोशी माझको एउटा ढुंगो क्रेन लगाएर फुटाउने बताए । प्रधानमन्त्रीको आशय दूधकोशी, अरुण र तमोरको
पलले सुटुक्क रियासासँग गरे विहे, मिडियाको अगाडी बेहुला-बेहुली मज्जाले नाचे (हेर्नुहोस भिडियो)
लकडाउनको एक वर्ष : उद्योग, व्यापार र निर्माण तंग्रियो, कोमामै छ पर्यटन
गैडाको गणना गर्न गएका मन्त्री आलेले हात्तीमाथि चढेर सिट्ठी फुकेपछी…
उपत्यकाभित्र कोरोनाको डर बढेको छ । प्रशासनहरुले रात्रिकालीन व्यवसाय गर्न नै रोक लगाउन थालेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । बुधवारको जिल्ला कोरोना भाइरस विपद् व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी) को बैठकले राति ११ बजेपछि व्यवसाय सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो । ललितपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललितकुमार बस्नेतले बैठकका निर्णयबारे जानकारी गराउँदै क्वारेन्टीन र आइसोलेसन केन्द्रलाई तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय भएको जनाएका छन् । भारतमा कोरोनाको मृत्युदर बढ्दै गएको र नेपालमा समेत संक्रमण पुनः बढेकाले संक्रमण बढ्न नदिन बैठकले केही मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । बैठकले व्यवसाय सञ्चालन गर्दा भीडभाड नहुने र स्वास्थ्य तथा सुरक्षाका तोकिएका मापदण्डहरू पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय समेत गरेको छ ।
११ चैत, काठमाडौं । कोरोना भाइरसको महामारी फैलन नदिन सरकारले देशमा पहिलोपटक गरेको लकडाउनको आज ठ्याक्कै एक वर्ष पुरा भएको...
चितवन । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रतापपुरबाट गैँडा गणना शुरु गरिएको छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा एकै...
मंगलबारदेखि नेप्सेमा कारोबार भएका ग्रिन लाइफ र महिला लघुवित्तको शेयर मूल्य कति?
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा आजदेखि दुई कम्पनीहरु ग्रिन लाइफ हाइड्रो र महिला लघुवित्तको शेयर कारोबार सुरु भएको छ । पहिलो...
धेरै नभुक न ल …! मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पहिलो श्रेय स्व: राजा श्री ५ विरेन्द्रलाई जान्छ , स्व. राजा विरेन्द्रकै...
नायक पल शाह र रियासा दाहाल बीच भब्य रुप’मा सुटुक्क बिबाह भएको छ। उनीह’रुको सुटुक्क बिबाह भएको हो।मिडिया पुग्दा पल...
भारतीय नायिका गीताञ्जली थापाले एक नेपाली चलचित्रमा अभिनय गर्ने भएकी छिन् । उनले अभिनय गर्न लागेको चलचित्र ‘जार’को छायांकन बुधबारदेखि...
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा आजदेखि दुई कम्पनीहरु ग्रिन लाइफ हाइड्रो र महिला लघुवित्तको शेयर कारोबार सुरु भएको छ । पहिलो कारोबारमा ग्रिन लाइफ हाइड्रोको प्रतिकित्ता शेयर २९९ रुपैयाँ र महिला लघुवित्तको प्रतिकित्ता ४३८ रुपैयाँले कारोबार सुरु भएको छ । महिला लघुवित्तको पहिलो कारोबारको लागि नेप्सेले ३१३.१६ देखि ९३९.४८ सम्मको सुरुवाती रेन्ज...
विप्लवले किन काठमाडौं छाडे
रोचक/ बिचित्र संसार
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा आजदेखि दुई कम्पनीहरु ग्रिन लाइफ हाइड्रो र महिला लघुवित्तको शेयर कारोबार सुरु भएको छ । पहिलो कारोबारमा ग्रिन लाइफ हाइड्रोको प्रतिकित्ता शेयर २९९ रुपैयाँ र महिला लघुवित्तको प्रतिकित्ता ४३८ रुपैयाँले कारोबार सुरु भएको छ । महिला लघुवित्तको पहिलो कारोबारको लागि नेप्सेले ३१३.१६ देखि ९३९.४८ सम्मको सुरुवाती रेन्ज तोकेकोमा ४३८ मा पहिलो कारोबार भएको हो । महिला लघुवित्तले माघ ३० गतेदेखि आईपिओ बिक्रि खुला...
प्रकाशक तथा प्रधान सम्पादक : गोकर्ण छेत्री
कम्पनि दर्ता :
सम्पर्क नम्वर :
Copyright © 2021 All right reserved to City Dainik Website By: Baidar Group